Ọnụahịa ụlọ ọrụ China China Azụmahịa Greenhouse Poly Film Multi-Span Greenhouse Light Deprivation-PBMG002 ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Aixiang
Ụdị Gothic Multi Span
Ọnụahịa ụlọ ọrụ China Commercial Greenhouse Poly Film Multi-Span Greenhouse Light Deprivation-PBMG002
Cannabis Greenhouse jikọtara ya na mkpuchi ihe nkiri plastik
Ngwọta akụ na ụba kachasị na -emekwa ka ngbanwe nke griin haus dịkwuo elu ma dị mfe ịkwasa
Dochie ihe nkiri plastik kwa afọ 3 ruo afọ 5 iji hụ na uru griin haus bara
Griin haus gbara ọchịchịrị (Greenhouse Disrivation Greenhouse)
1.Aixiang na-emepụta gburugburu ebe na-eto eto nke ọma site na ịchepụta ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke na-ewepụta ọkụ ọkụ zuru oke ma jikọta usoro njikwa ihu igwe iji hụ na mkpụrụ kacha dị elu na nke kacha mma, na ọnụ ahịa ọrụ kacha ala.
2. Anyị na ọtụtụ ndị na -emepụta ọkụ na -eto eto na -emekọrịta ihe ugbu a iji mepụta usoro ọkụ ọkụ ahaziri iche maka ụdị osisi dị iche iche, gụnyere ọkụ ọkụ LED yana nnukwu nrụgide Sodium na ọkụ ọkụ metal. Anyị na -ejikọ nke a na teknụzụ na -egbochi ọkụ iji hụ na ihe ọkụkụ osisi gị nwetara oke ọkụ ọ chọrọ maka uto mkpụrụ osisi kacha mma.
3. Greenhouses na-enweghị ọkụ na-achọ nnukwu kpo oku na jụrụ oyi iji jigide ọnọdụ okpomọkụ maka uto osisi dị mma. Anyị na-arụ ọrụ nke ọma na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji belata ike ike ma na-eto kwa afọ. Ngwa griin haus anyị na -ebute gburugburu ebe obibi na -adịgide adịgide, nke na -aba ụba nke ukwuu yana ọnụ ahịa ọrụ dị ala yana imụba mmepụta.
Banyere AX Blackout Greenhouse
Ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -agbapụ, na -adabere na griin hausị ọdịnala, na -eme ka a mata nhazi ọrụ ọkụ ọkụ griin haus.
Na ndabere nke griin haus griin haus, PC griin haus na iko griin haus, ịgbakwunye sistemụ ndo dị n'ime bụ griin haus kachasị mfe.
Dịka ọmụmaatụ, a na -agbanwe ihe mkpuchi nke griin haus ọwara ka ọ bụrụ ihe nkiri ojii, nke na -aghọ griin haus gbara ọchịchịrị.
Uru nke ụlọ griinụ a bụ na ọnụ ahịa ya pere mpe, mana ọghọm ya bụ na ọ nweghị ike izere mmiri ozuzo mgbe achọrọ ikuku ma ọ bụ ọkụ sitere n'okike.
Ya mere, iji mee ka ọrụ griin haus bụrụ nke zuru oke.
Griin haus gbachapụrụ agbacha bụ ụzọ bụ isi iji gbakwunye sistemụ ndo n'ime ụlọ.
N'otu oge ahụ, anyị ga -agbakwunye sistemụ ọkụ ọkụ, sistemụ kpo oku, ikuku ikuku na sistemụ jụrụ oyi, ihe na -emepụta carbon dioxide, sistemụ mgbasa ikuku, wdg,
Iji mee ka ihe ọkụkụ na -eto eto gburugburu.
Ihe na -ekpuchi ya dabere na ntọala nke ụlọ griin haus.
Ihe na-ekpuchi oghere griin haus oghere: Ihe nkiri, PC Board
Ihe mkpuchi ụlọ Venlo Greenhouse: iko, bọọdụ PC
Banyere ihe iko
Banyere polycarbonate panel
Nghọta dị elu,
Mgbatị siri ike,
Ezi mkpuchi ọrụ,
-Já na-eguzogide na uzuzu na-egosi,
Aesthetics siri ike
Banyere Ihe Nkiri Black
Ọkpụrụkpụ: 0.13 mm
Shading ọnụego: 100% shading
Ike ọdụdọ (kwụ ọtọ na kwụ) ： 35MPa/35MPa
Mgbatị na ezumike (Vetikal na kwụ) ： 800%/1000%
Akụkụ anya mmiri dọkatụrụ adọka (Vetikal na kwụ) ： 100kN/m/110kN/m
Mkpa nke ngwa ： Cannabis/meshroom/husbandry anụmanụ
Nke gara aga: China Ọdịdị Dị Mfe Galvanized Steel Frame PC Polycarbonate/PE Po Film/Glass Multi Span Tomato/Strawberry/Kukumba/Pepper Greenhouses for Garden/Commercial-PBMV002
Osote: Ọnụ ego griinụ griin haus China na-arụ ọrụ ugbo na-ekpuchi ya na Po/PE/PP Film-PTD004
Griin haus nke ọkụ cannabis
Griin haus ọkụ
Full gbara ọchịchịrị griin haus With Multi-layer Seedb ...
100% Automatic Blachouse Greenhouse With Hydropo ...
N'ogbe OEM/ODM China Hemp Okooko osisi Cbd Planti ...
Ou Commercial Multi Span Greenhouse PC Bo ...
Onye na -eduzi emeputa maka sistemụ ọchịchịrị China ...